Waxaad u adeegsan kartaa khibradda shirkadda Presto Automation si aad u kordhiso guushaada wax soo saar. Laga soo bilaabo tababbarka qalabka bilowga ah, iyada oo loo marayo tababarka socda ee socda, ilaa lagala tashiga wax soo saarka, Presto Automation waxay leedahay aqoon farsamo iyo hawl socodsiineed oo loo baahan yahay si loo hubiyo in habka wax soosaarku u socdo si habsami leh oo hufan intii suurtagal ah.
HORDHAC QAADASHO OO KU SAABSAN FARSAMADA FARSAMADA PRESTO
Macaamiisha cusub ee Presto Automation, waxaan u fidinnaa aqoon isweydaarsiyo aasaasi ah oo ballaaran. Iyadoo la adeegsanayo mashiinadayada tababarka casriga ah, khubaradayada waxay ku xiraan aragtida iyo dhaqanka dunida dhabta ah. Macaamiishayadu waxay la soo baxaan kalsooni ku qabka hawlgallada mashiinkooda, iyo madax bannaan, shaqaale bartilmaameed u janjeedha.
KA FAA'IIDEYSAN KHIBRADDEENA
U samee jadwal latashi mid ka mid ah khubarada 'Presto Automation', oo baro sida aad ula kulmi karto shuruudaha macaamiishaada si ka dhakhso badan oo qiimo jaban. Baro la-tashiga loogu talagalay baahiyahaaga gaarka ah sida si hufan loogu fuliyo barnaamijyada mashiinka iyo howlaha hawlgalka, sida loo kordhiyo nolosha adeegga qalabkaaga, iyo sida, ugu dambeyntii, loo kordhiyo wax soo saarka nidaamkaaga Presto Automation.
TABARBAR LOOGU TALAGALAY
Shirkadda 'Presto Automation' waxay sidoo kale ku bixisaa goobta (goobtaada) tababar shaqsiyeed oo ka turjumaya baahiyaha gaarka ah ee nidaamkaaga, iyo sidoo kale astaamaha lagama maarmaanka u ah qaybta aad soo saareyso. Waxaad ka heli doontaa aragti dhammaystiran dhammaan faa'iidooyinka Presto Automation.
Waxaan ku bixinaa Adeegyo & La-talin meelaha soo socda:
● Qalabka mashiinka iyo qalabka
Design Naqshadaynta qalabka
Xakamaynta nidaamyada iyo barnaamijyada
Operation Qalliinka mashiinka
Qaab dhismeedka & naqshadeynta
Mashiinnada otomatiga ee 'Presto' waxaa loo yaqaanaa kalsoonidooda. Si kastaba ha noqotee, haddii dhibaato dhacdo, farsamayaqaanadeena aqoonta sare leh ayaa jooga adeeggaaga. Khabiiradayadu waxay baari doonaan dhibaatada, waxay abuuri doonaan xal waxayna fulin doonaan adeegga lagama maarmaanka u ah nidaamkaaga otomaatiga ee Presto si deg deg ah oo hufan. Hadafkeenu waa inaan marwalba hubino in wax soosaarkaagu si habsami leh u socdo, iyo inaan la kulanno macaamiishayada rajadooda.
Waxbadan ka baro kuweena Adeegyada Taageerada Macaamiisha
Fadlan xor u aha inaad nala soo xiriirto wixii su'aalo ah ee aad qabtid adigoo wacaya +86 180 1884 3376.